मित्सुबिशी Airtrek - यो "मित्सुबिशी ASX" को रूपमा जानिन्छ अवधारणा कार मा निर्मित क्रसओभर, छ। सक्रिय खेल क्रसओभर (अनुवाद संक्षिप्त रूपमा) 2001 मा संसारमा भएको थियो। आफ्नो प्रस्तुति मा, उहाँले आफ्नो स्टाइलिश उपस्थिति र राम्रो प्रदर्शन संग सबैलाई अचम्ममा। एक मित्सुबिशी Airtrek - यो भने गर्न सकिन्छ, अवधारणा को एक निरंतरता। यसलाई "हावा बाटो" को रूपमा अनुवाद गरिएको छ, र हामी निर्धक्क भई कार पूर्ण यो उनको नाम अनुरूप छ भनेर भन्न सकिन्छ।
यो कार तथाकथित universality को रणनीति को continuer थियो भन्न म चाहन्छु पहिलो कुरा। र यो एक समयमा मोडेल RVR उत्पादन हुन थालेपछि स्थापित भएको थियो। यो मित्सुबिशी Airtrek उत्पादन कि केवल पाँच-ढोका संस्करण थाहा महत्त्वपूर्ण छ। र मोडेल, राम्रो संकुचित देखिन्छ कि स्पेस धेरै भित्र तथ्यलाई बावजुद। र त्यहाँ सजिलै धेरै वयस्क र अग्लो मान्छे समायोजित। र ठूलो वस्तुहरू सुरक्षित भित्र राखिएको गर्न सकिन्छ। निस्सन्देह, आवश्यकता हुन यदि कार, छैन उपयुक्त, तर धेरै ठूलो सूटकेस वा बैग भित्र सजिलै समायोजित धेरै, लामो व्यापक वा भारी वस्तुहरु को यातायात लागि।
को क्रसओभर को जारी जो मार्फत निर्माता कार र आफ्नो डिजाइन को डिजाइन मा अलग हेर्न थालेका गरेको चिरपरिचित जापानी कम्पनी, मा प्रमुख सुधार को शुरुवात चिन्ह लगाइयो।
अनिवार्य मित्सुबिशी Airtrek - लांसर Cedia भनिने पालकी को आधार मा आधारित थियो जो को छत एसयूवी। यो मोडेल "Pajero खेल" प्रतिस्थापित छ र तत्काल सक्रिय र स्पोर्टी जीवन शैली को connoisseurs माझ लोकप्रियता प्राप्त गरियो।
पहिलो संस्करण या त 2- वा 2.4-लीटर इन्जिन पूरा गरेका थिए। र तिनीहरूलाई प्रत्येक स्थापित गर्न सकिन्छ मोडेल गर्न अगाडि-पाङ्ग्रा र पछिल्लो-पाङ्ग्रा ड्राइव मा दुवै। तर, सबै संस्करण मात्र 4-गति "स्वचालित" सुसज्जित एक मार्गदर्शन गियर परिवर्तन संग मोड पूरा गरेका थिए। एक पाङ्ग्रा ड्राइव मोडेल तथाकथित सक्रिय लागि समायोजित केन्द्र अंतर।
मात्र 1710h4410h1550 मिमि: आकार मा, यो कार साँच्चै सानो छ। जमीन अवकास, खैर, खुसी - 195 मिमी, रूसी सडक लागि एक उत्कृष्ट सूचक! 1745 किलो - एसयूवी पनि खराब लागि वजन। कम असाधारण शरीर तपाईं बस बस विशाल थियो भन्ने तथ्यलाई विचार, विशेष गरी यदि धेरै असामान्य र मूल देखिन्छ। Wheelbase, खैर, 2625 मिमी छ। र यो दिइएको वर्ग को लागि सबै वर्तमान को सबैभन्दा लामो छ। प्रसिद्ध "निसान एक्स-ट्रेल" यो संग तुलना गर्न सकिन्छ भन्ने छ। तर कारण यो आकार को ठीक पछाडि पंक्ति मा स्थान हासिल गरिएको छ।
तर पारंपरिक संकुचित कार लागि प्रयोग ती प्रयोग दराज निर्माताहरु छन्। बाटो गरेर, पछिल्लो पंक्ति सजिलै केही बदलाव संग जोडेको गर्न सकिन्छ। र सानो घर भित्र मुख्य सामान बाहेक विभिन्न आकार लागि ठाउँ लुकाउँदै मुद्रा को धेरै किसिमका छन्।
मित्सुबिशी Airtrek सुधार र मोडेल स्तरवृद्धि गर्न निर्माताहरु प्रेरित छ कि धेरै सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भयो। के परिवर्तन? 2002 मा, त्यहाँ2लिटर को 4-सिलिन्डर इन्जिनको क्षमता एक ब्रान्ड नयाँ लाइन थियो। यो कल संग सुसज्जित गर्न सकिन्छ र जसबाट समग्र शक्ति 250 "घोडाहरू" को मान वृद्धि! ड्राइभिङ प्रदर्शन पनि सुधार भएको छ। कार प्राप्त गरेको छ स्वतन्त्र निलम्बन (सबै चार पाङ्ग्रेमा), र मोटर पार राख्न निर्णय भएको थियो। शरीर वाहक बनेको छ।
र 2003 मा, विकासकर्ताहरूले को Outlander Agriaffaires को प्रचालन रूपमा चिनिने मोडेल संग क्रसओभर डिजाइन एकताबद्ध गर्न निर्णय गरेका छौं। मित्सुबिशी Airtrek परिणाम सकारात्मक को प्राविधिक विशेषताहरु लागि समीक्षाएँ, तर धेरै डिजाइन मन थिएन। त्यसैले विशेषज्ञहरु खातामा यो लिएको र कार धर्मान्तरित छ।
विशेषताहरु मित्सुबिशी Airtrek एकदम रोचक। विशेष ध्यान मिसिन को डिजाइन उल्लेख गर्नुपर्छ। यो एक स्टेशन गाडी र एसयूवी बीच एक क्रस छ। हामी यो वर्ग को अन्य प्रतिनिधिहरु संग कार तुलना भने, यो स्पष्ट जीत हुनेछ। पहिले, त्यो एक सुंदर उपस्थिति, सहज मौज, जो पनि धेरै मेल खान्छ देखिन्छ छ। विशेषज्ञहरु साँच्चै कस स्टाइल मा काम गरे। तर कार निर्यात गरिने ज्ञात यो भयो पनि अधिक परिष्कृत देखिन्छ पछि। पनि चासो को क्यालिफोर्निया स्टूडियो "मित्सुबिशी" मा डिजाइन सम्पादन गरियो।
कार यसलाई जस्तै सीआर-वी र वनपाल रूपमा मोडेल सबै त्यहाँ किनभने, राम्रो छ, जो कुनै angularity र शोधन, छ। यो क्षण मोडेल पनि अधिक व्यक्तिगत र मौलिक बनाउँछ। कार को धारा यो धेरै originality र dissimilarity खडा। तपाईं राम्ररी हेर्न भने, तपाईं यो मोडेल मा हाल को वर्ष मा वैचारिक समूह कार को सबै जोडती देख्न सक्छौं। तर सबैभन्दा यसको उपस्थिति मूल - यो अगाडि भाग हो। यो विशिष्ट चार headlamps, ठूलो को "नजर" जंगला 16 इन्च मिश्र धातु पाङ्ग्राहरू, मोटा पाङ्ग्रा arches - यो सबै खेलाडी र आक्रामक आकर्षक देखिन्छ। सोही, मित्सुबिशी Airtrek रेडियेटर, बारहरू पछि लुकेको, भेला गुणस्तर - रिलीज को सुरुमा यो कार किनेको र यो दिन यो बेच्न छैन गरेका मालिक, कि यो कुनै प्रमुख क्षति उत्पन्न गर्दैन भन्न र मरम्मत को आवश्यकता हो। इन्जिन राम्रो ठंडा गर्दछ। मुख्य कुरा - रेडिएटरको नियमित समीक्षा सल्लाह सफा गर्न, त्यसैले आफ्नो जीवन लम्ब्याउनु हुनेछ।
उपकरण र भित्री
यो कार मालिक बाँकी भइरहेको बुझ्न सम्भव थियो कसरी मित्सुबिशी Airtrek समीक्षा ज्यादातर सकारात्मक छन्। र यो मात्र होइन यो मिसिन प्राविधिक राम्रो छ र राम्रो देखिन्छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ। अर्को महत्त्वपूर्ण सैलून। आखिर, यो कहाँ हो आफ्नो समय चालक को बहुमत।
राम्रो योजना भित्री, सरल कार्यात्मक तर स्वादिष्ट छ। कारण यसको सुविधाजनक स्थानमा प्रसारण लीवर धेरै मूल्यवान छ जो तल, पर्याप्त ठाउँ खाली छ। थप प्रशंसापत्र को मार्गदर्शन काम धेरै अधिक आरामदायक छ भन्छन्। आखिर, यो सही तपाईँको औँलामा छ।
अनावश्यक सजावट महान चांदी प्लेटिनम रंग बनेको छ। कुर्सियों सहज र सुविधाजनक। हो, र ठोस उपकरण - एक रंग एलसीडी प्रदर्शन र अपरिहार्य एक डीभिडी-खेलाडी र नेभिगेटर। सहयोग पनि पार्किङ उपलब्ध र प्रदर्शन अन्धा क्षेत्र को समारोह छ। भनेर उपकरण गरिब भनिन्छ गर्न सकिन्छ। भित्र के तपाईंले कहिल्यै औसत चालक आवश्यक हुन सक्छ सबै छ, र यो स्पष्ट प्लस छ।
सिद्धान्त मा, साथै वस्तुतः कुनै पनि अन्य मिसिन, यो मोडेल "मित्सुबिशी" यसको आफ्नै त्रुटि कोड छ। मित्सुबिशी Airtrek उचित हेरचाह माग। उदाहरणका लागि, यो खराब भएको gaskets प्रतिस्थापन गरिएको छ भने, प्रणाली त्रुटि R0170 उत्पन्न हुनेछ। र समस्या यो समस्या को मूल पहिचान गर्न सम्भव सधैं छैन भन्ने छ। R0170 देखि - यो पद, हामी भन्न सक्छौं, सार्वभौमिक ईंन्धन समायोजन सिस्टम को विफलता परिभाषित।
र यो कार जाँदा एक सानो गाला उठेको छ कि हुन्छ। मित्सुबिशी Airtrek यस मामला मा यो सेवा स्टेशन गर्न ड्राइव राम्रो छ। हामी, ज्वलन coils हेर्न र पनि प्रसारण ईंन्धन प्रणालीमा दबाब मापन गर्न छ। यो कारण कल मा एक विफलता गर्न अझै पनि छ। एक निदान आवश्यक - यो त्रुटि देखाउनेछ। यो त आवश्यक हुन सक्छ मोटर सुरक्षा मित्सुबिशी Airtrek।
सामान्यतया, मालिक कार पछि र यो सर्त चलाउन छैन भने कुनै समस्या हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छन्। मोडेल उच्च गुणवत्ता र लामो समय टिक्न हुनेछ।
अन्तमा म उत्पादन पाँच वर्ष को प्रकाश मा उत्पादन सबै मोडेल सूची चाहन्छ। विविधता कसरी दावा गर्छ मित्सुबिशी Airtrek? इन्जिन, उदाहरणका लागि, केवल 2- र 2.4-लीटर, एक सानो चयन भएको थियो। तर, नौ संस्करण थिए। सबै - पाँच-ढोका एसयूवी। त्यहाँ दुई जुन 2001 देखि 2006 को सेप्टेम्बर प्रकाशित, 126-HP इन्जिन (2.0 र 2.0 4WD) संग संस्करण थिए। सबैभन्दा शक्तिशाली मोडेल - एक 2.0 टी 4WD 240 लिटर। एक। 2.4-लीटर इन्जिन 160 र 133 लिटर संग चार संस्करण अर्को बेचे। एक। (पारंपरिक र सबै-पाङ्ग्रा ड्राइव)। अन्तमा, मोडेल एक 139-HP इन्जिन उपलब्ध थियो।
सामान्य मा, यो आराम, सुविधा, originality, स्कोप र दक्षता कदर गर्नेहरूलाई एक कार छ। सबैभन्दा जापानी समूह को मोडेल लागि शानदार र प्रसिद्ध को छ - हामी "Airtrek" भनेर भन्न सकिन्छ। कुनै आश्चर्य धेरै र अहिले यो मिसिन देखि विज्ञापन को लागि देख रहे।
कार बिक्री मा कर के हो?
साँचो लिजेन्ड - शेवरलेट Impala '67
इन्जिन Decarbonizer आफ्नै हात कस्तो छ?
परिवर्तनीय "ओडी" (ओडी): विनिर्देशों, फोटो र मोडेल को समीक्षा को सूची
आफ्नो वाहन को विशिष्ट इन्धन खपत
को पेट्रोल इन्जिन कसरी सिस्टम बृद्धि गर्छ?
गुरुत्वाकर्षण को कार्य अन्तर्गत शरीर को आन्दोलन: सूत्र को एक परिभाषा
घर मा आफ्नो मुद्रा कसरी मिलाउने?
एक स्वादिष्ट ह्यास लागि नुस्खा। kvass, kefir, छांछ मा Okroshka
चीनको प्रमुख नदी र पोखरी के हुन्?
सामाजिक सम्बन्ध को सिस्टम मा मानिस। सैद्धान्तिक पक्ष
नियम र श्रम प्रक्रियाको नियमहरु सुरक्षा निर्देशन प्रतिबिम्बित छन्
ती लागि जो आफ्नो प्रेमिका को लागि एक आश्चर्य बनाउन जाँदैछन्
Kolambus िईद्भस - निर्देशक, दुनिया चलचित्र "घर अकेला" र पहिलो दुई Harry Potter चलचित्र दिनुभयो
अज्ञात Lomonosov: रोचक तथ्य
अग्लो पुरुष जूता - स्टाइलिश मानिसहरू लागि जूता